Dowladda Soomaaliya oo ka mamnuucday inay dalka soo galaan dadka ka imaanaya afar dal – Xogsoor News Network
Guddoonka Qaban Qaabada Caleema-Saarka Madaxweynaha Maamulka Galmudug Oo Gaaray Magaalada Dhuusamareeb.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka mamnuucday inay dalka soo galaan rakaabka ka imaanaya afar dal oo ee si ba’an u saameeyay Cudurka Coronavirus.
Amar ka soo baxay Hey’adda Duulista rayidka ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay si looga hortago faafitaanka cudurka Coronavirus in dalka laga mamnuucay inay soo halaan rakaabka ka imaanaya dalalka Shiinaha, Iiraan, Talyaaniga iyo Koofur Kuuriya ee isugu jira muwaadiniinta iyo ajaaniibta u dhashay dalalkaas.
Sidoo kale waxaa lagu wargeliyay shaqaalaha iyo duuliyeyaasha diyaaradaha in haddii rakaabka qaar ee ay uga shakiyaan inuu haayo cudurka ay qalabka raadiyaha kala soo xiriiraan howlwadeenada hey’adda duulista, ka hor inta aysan diyaarada soo cagadhigan, si looga hortago ama loo mariyo qalabka caafimaadka ee lagu baaro dadka qaba xumadda cudurka Coronavirus.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa garoomada diyaaradaha ee dalka ku diyaarisay howlwadeeno baaraya dadka ka soo dagaya garoomada, si loola socdo xaaladooda caafimaad.
Si kastaba ha ahaatee dalalka Itoobiya iyo Kenya oo deris la ah Soomaaliya ayaa maalmo ka hor laga helay kiisaskii u horreeyay cudurka Coronavirus.
DAAWO:-Xasan Daahir oo af lagaadeeyay beesha Abgaal
Ganacsiga magaalada Boosaaso oo maanta xiran
Wasiir Beyle oo sheegay in Bankiga Adduunka uu Soomaaliya ka cafiyay dhamaan deynta uu ku lahaa